Itaosy : Lehilahy maty voatifitry ny polisy -
AccueilSongandinaItaosy : Lehilahy maty voatifitry ny polisy
Lehilahy iray fantatra amin’ny solon’anarana hoe Rasta, izay voalaza fa mpanao fanendahana miaro herisetra eny amin’iny faritr’i Bemasoandro Itaosy iny no maty voatifitry ny polisy ny alin’ny zoma hifoha sabotsy teo, tokony ho tamin’ny 12 ora sy fahefany. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny polisim-pirenena, dia avy nanao ny asa ratsiny niaraka tamin’ny roalahy hafa ity lehilahy ity no nifanenjehan’ireo mpitandro filaminana nanao fisafoana ny tanàna tamin’io alina io. Olona miisa telo no nataon’izy ireo lasibatra tamin’izany, ka lasa avokoa ny vola sy ny finday ary ny firavaka. Raha ny loharanom-baovao ihany, dia tsy nanana na inona na inona nomena ny iray tamin’ireo voaendaka , ka niharan’ny vono sy ny daroka mandrivorivo avy hatrany. Rehefa vita izay nataon’izy ireo, dia nitari-dositra nitsoaka ireto farany. Teny an-dalana hamonjy fodiana kosa ireo niharan-doza no nifanehitra tamin’ireo polisin’ny kaomisaria an’Itaosy nanao fisafoana, ka nitantara ny zava-nanjo azy ireo.
Natao ny fanarahan-dia, ka tsy lasa lavitra akory ireo olon-dratsy dia tsikaritr’izy ireo. Vantany vao nahita ny fiavian’ireo mpitandro filaminana sy ireo olona voaendaka anefa izy telolahy ireo, dia nitari-dositra nitsoaka, ka raikitra ny fifanenjehana teo amin’ny roa tonta. Tsy lasa lavitra dia voasambotra i Rasta sy ny namany iray, raha toa ka tafaporitsaka ilay fanintelony. Teo am-pikasana hilefa tany anaty elakelan-trano maizimaizina ity lehilahy ity no nampitandreman’ireo polisy, ary efa nandefasana tifi-danitra hanakanana azy, saingy tsy nety nijanona izy, ka izao maty voatifitra izao. Araka ny fanamarinam-baovao, dia nentina namonjy hopitaly ity farany saingy tsy tana intsony ny ainy rehefa tonga teny an-toerana. Raha ny voalazan’ny teo anivon’ny polisim-pirenena ihany koa, dia efa nifampitadiavana fatratra nanomboka ny volana Novambra lasa teo i Rasta. “Efa voatonona matetika amin’ny asa fanafihana mitam-piadiana sy vaky trano, ary fanendahana anaty fitohanan’ny fiara amin’iny faritra Ampasika iny , Itaosy sy ny manodidina iny i Rasta“, hoy hatrany ny loharanom-baovao. Mbola tratra tany amin’ireo mpanendaka tra-tehaka ireo moa ny zavatra avy norobain’izy ireo, ary naverina tany amin’ny tompony.
Raha ny vaovao farany voarain’ny teo anivon’ny polisim-pirenena, dia fantatra fa mikasa hanakorontana sy hi-grevy manoloana ny kaomisarian’Itaosy ny fianakaviana sy ireo naman’ i Rasta, mpanao “rugby” eny amin’iny faritra iny, anio alatsinainy. Izany dia ho fanehoan’izy ireo ny tsy fahafaliam-pony noho ny zava-nitranga. Nanamafy kosa anefa ny teo anivon’ny polisim-pirenena faraha hanatanteraka izany tokoa ireto farany, dia tsy hilefitra velively manoloana ny fihoaram-pefy, ny asan-jiolahy, ary ny resaka fandikan-dalàna izy ireo. Isan’ireo toerana mafana hanjakan’ny hala-botry sy ny fanafihana maro samihafa eny amin’iny faritr’Itaosy iny, na dia efa misy foana aza ny fisafoana ny tanàna andro sy alina. Saika teny amin’iny faritra iny ihany koa no nahalavoan’ireo manam-pahefana ireo mpanao kidnapping sy mpanao fanafihana mitam-piadiana mahery vaika tao anatin’ny efa-bolana teo.
watch Aladdin dans L’incendie du Rova de Manjakamiadana, 20 ans plus tôt
Mozelle dans Rallye ASACM : Mathieu intraitable de bout en bout !
manga attaque des titans streaming dans Fikambanana masoandro mody-NAHAZO FANAMPIANA AVY AMIN’NY VADIN’NY FILOHA
Fikambanana Maitso Ririnina : Manohana an’i Hery Rajaonarimampianina
Abagado: I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few…
http://yan.nu/akashi/bbsbbs3/yybbs.cgi?list=thread: Hi there to every one, it's actually a fastidious for me to pay a visit this web site,…
watch Aladdin: Thank you for this article. I will also like to say that it can always be hard when…